YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, July 02
NEJ/ ၂ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
ဒီကေဘီအေ တပ်ရင်း (၉၀၇) အဖွဲ့သို့ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ရာ တပ်ရင်းတာဝန်ရှိသူတဦးက ယခု ဖြစ်ပွားသည့်တိုက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သော်လည်း အသေးစိတ်အခြေအနေကို ပြောကြားရန် ငြင်းဆိုသည်။
ရန်ကုန်တွင် လိုင်စင်မဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးပါက ဆိုင်ကယ်သိမ်းရုံမက လူပါအဖမ်းခံရမည်
NEJ/ ၂ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
ရန်ကုန်တွင် လိုင်စင်မဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်များကို စီးနင်းခြင်းတွေ့ရှိပါက ယခု ဇူလိုင် (၁) ရက်မှစ၍ ဆိုင်ကယ်ကို နိုင်ငံပိုင်သိမ်းကာ လူကို ပုဒ်မ (၁၈၈) အရ ဖမ်းဆီးအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန် တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
ယခင်က လိုင်စင်မဲ့စီးခြင်းတွေ့ပါက ဆိုင်ကယ်ကို နိုင်ငံပိုင်သိမ်းကာ ဒဏ်ငွေ (၅) သောင်း ဒဏ်ရိုက် ခဲ့သော်လည်း ယခု ဆိုင်ကယ်ကိုသိမ်းရုံသာမက လူကိုပါ ဖမ်းဆီးမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ကြိုးမဲ့ကြေးနန်းနှင့် ယာဉ်ထိမ်းတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ဒု-ရဲမှူးကြီး အောင်နိုင်က ပြောသည်။
၎င်းက “အခု ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေ ဆိုင်ကယ်စီးမယ်ဆိုရင် စီးနင်းသူဝန်ထမ်းရဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပါ ကတ်ပြားကို လည်မှာဆွဲပြီး စီးဖို့ အကြောင်းကြားထားတယ်။ အဲလို လုပ်ရတာ စီးလာတဲ့ဆိုင်ကယ်သမားတွေကို စစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့အခါမှာ ၀န်ထမ်းနဲ့ အရပ်သား ကွဲကွဲပြားပြားသိနိုင်ပြီး ၀န်ထမ်းတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ရေးကတ်ပြားမပါရင် အရေးယူဒဏ်ရိုက်ခံရမှာ ဖြစ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
ထို့အပြင် လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော ဒေသများမှ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များသည်လည်း ရန်ကုန် မြူနီစပယ် ဧရိယာသို့ ၀င်မရကြောင်း၊ တွေ့ရှိပါက ဆိုင်ကယ်သိမ်း၊ လူဖမ်းခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တွင် ဆိုင်ကယ်စီးသော ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ဆိုင်ကယ် စီးဦးထုပ်ကို မေးသိုင်းကြိုးတပ်ဆင် ဆောင်းရန်၊ (၂) ဦး စီးနင်းမှုမပြုရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။
သို့သော် ထိုသို့အမိန့် ဥပဒေထုတ်ထားသော်လည်း ညီတူညီမျှလုပ်သင့်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် (၃) လ ခန့်က ဆိုင်ကယ် (၂) ယောက်စီး၍ အဖမ်းခံခဲ့ရသူတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “သူတို့က အမိန့်ပဲထုတ်နေတာ။ ကျနော် ဆိုင်ကယ်ကို (၂) ယောက်စီးတုန်းက ဖမ်းခံထိ တယ်။ ဒါနဲ့ အသိဗိုလ်ကြီးတယောက်ကတဆင့် ကိုယ်ဆိုင်ရာပိုင်ရာနဲ့ဆိုတော့ တပြားမှကို ပေးစရာ မလိုဘူး။ ယာဉ်ထိန်းနဲ့ ဗိုလ်ကြီးနဲ့က ရင်းနှီးတယ်လေ၊ ကိစ္စက ပြတ်သွားရော။ ကျနော်ပြောချင် တာက ဥပဒေထုတ်ရင် ညီတူညီမျှလုပ်ပေါ့။ ဒီလူက ဘယ်သူနဲ့သိလို့၊ ဘယ်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေ၊ ကြည့်ပြီး လုပ်ပေးရမှာပေါ့ ဆိုတာမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ယာဉ်ထိန်းမှာ အသိမရှိတဲ့သူကျတော့ သူတို့ ဥပဒေအတိုင်း ခံရတယ်။ အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး” ဟု ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် မေ (၃) ရက်မှ ဇွန် (၂၀) ရက်အထိ လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်နှင့် နယ်ကျော်ဆိုင်ကယ် အပါ
အ၀င် (၂) ဦးစီးခြင်း၊ ဦးထုပ်မပါဘဲ စီးခြင်းတို့အား ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် ဆိုင်ကယ်စီးရေ (၁၄၀) ကျော် ခန့်ရှိသည်ဟု ပြည်တွင်သတင်းဂျာနယ်များတွင် ဖော်ပြရေးသားခဲ့သည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းအလွန် ဧရာဝတီဆားလုပ်ငန်း နာလန်မထူနိုင်သေး
ပီတာအောင်/ ၂ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ဧရာဝတီတိုင်းရှိ ဆားကွင်းများ ပျက်စီးသွားသဖြင့် မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်အပြီး (၂) လအကြာတွင် ဆားဈေးနှုန်း (၃) ဆခန့် မြင့်တက်နေပြီး ဆားလုပ်ငန်းများ နာလန်ပြန်ထူ နိုင်ရန် အလှမ်းဝေးနေဆဲဖြစ်သည်ဟု ဆားလုပ်ငန်းရှင်တို့က ပြောကြားသည်။
မုန်တိုင်းမတိုင်ခင်က ရန်ကုန်တွင် ဆားအချော (၁) ပိဿာ လက်လီရောင်းဈေး ကျပ် (၂၀၀) ခန့် ရှိရာမှ မုန်တိုင်းပြီးစ၌ (၁) ပိဿာ ကျပ် (၁,၀၀၀ ) ကျော်အထိ ခုန်တက်သွားပြီး ယနေ့ ရန်ကုန် ဈေးကွက် ပေါက်ဈေး (၁) ပိဿာ ကျပ် (၅၀၀) ၀န်းကျင်ရှိသည်ဟု လသာမြို့နယ်မှ ဆား အရောင်းအ၀ယ်လုပ်သူတဦးက ပြောသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်မြို့၌လည်း မုန်တိုင်းဒဏ်မခံရခင်က စက်ရုံထုတ်ဈေး ဆားအကြမ်း
(၁) ပိဿာ ကျပ် (၈၀)၊ ဆားအချော တပိဿာ ကျပ် (၁၁၀) ခန့်သာရှိပြီး လက်ရှိပေါက်ဈေး
ဆားအကြမ်း (၁) ပိဿာ ကျပ် (၂၄၀) ဆားချော (၁) ပိဿာ ကျပ် (၃၇၀) ထိ ရှိသည်ဟု မြို့ခံ ဆားစက်ပိုင်ရှင်တဦးက ပြောသည်။
မေ (၂) ရက်နှင့် (၃) ရက်က တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အဓိက ဆားထုတ်လုပ်ရာ ဧရာဝတီတိုင်း လပွတ္တာနှင့် ငပုတောမြို့နယ်တို့ရှိ နေလှန်းဆားကွင်းများ ရွှံ့သဲများဖုန်းကာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ဆားဖိုသူကြီးများနှင့် ဆားလုပ်သားများလည်း သေဆုံး ကုန်ပြီး ယခုအချိန်အထိ ပြန်လည်နာလန်မထူနိုင်ဘဲရှိသည်ဟု ဆားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ
ပုသိမ်မြို့မှ ဆားစက်ပိုင်ရှင်တဦးက “နဂိုဈေးကိုတော့ ပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ အကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပစ္စည်းက အရမ်းအ၀င်နည်းသွားပြီ။ ပျက်စီးသွားတဲ့ ဆားကွင်းတွေကို ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ နဂိုအနေအထားကို ပြန်ရောက်ဖို့က တော်တော်ခဲယဉ်းသွားပြီ။ တချို့နေရာ တွေက ကွင်းတွေ ပျက်စီးသွားပြီး လူကကျန်တယ်။ တချို့နေရာတွေက ကွင်းလဲပျက်တယ်၊ အလုပ်သမားရော၊ ပိုင်ရှင်ရော သေဆုံးသွားတယ်။ ပြန်လုပ်ဖို့ဆိုတာက လူအားရော၊ ငွေအားရော လိုသွားပြီ။ နောက်တခါ အလုပ်သမားအင်အားလည်း အဲဒီဒေသတွေမှာ တော်တော်နည်းသွားပြီ” ဟုပြောသည်။
လပွတ္တာမြို့နယ်တွင် ယခင်က ဒေသခံသူဌေးများက ဆားဖိုသူကြီးများကို ငွေကြိုတင်ထုတ်ချေး၍ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင် မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသဖြင့် ငွေကြို မပေးနိုင်ကြ တော့ကြောင်း၊ စစ်အစိုးရက လယ်ယာလုပ်ငန်းအတွက် ချေးငွေထုတ်ပေးခြင်းနှင့် မျိုးစပါးပေးခြင်း စသည့်အကူအညီအချို့ ပေးနေသော်လည်း ဆားလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အကူအညီမပေးရုံမက ဆားဖိုများပါ အသိမ်းခံရမည့်ကိန်းဆိုက်နေသည်ဟု ဒေသခံတို့က ပြောသည်။
လပွတ္တာမြို့ခံတဦးက“ရေလွှမ်းတဲ့ဆားကွင်းတွေက အကုန်ပျက်တယ်။ အစကနေပြန်လုပ်ရမှာ။ သူတို့ကတော့ သူတို့ဆားဖို သူတို့ပြန်လိုချင်တာပေါ့။ ခုဟာက ဆားလုပ်ငန်း မလုပ်နိုင်တော့တဲ့သူကို မလုပ်နိုင်ရင် ဆားကွင်းသိမ်းမယ့် ပုံစံဖြစ်နေတယ်။ တချို့ကတော့ ပြန်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မလုပ်နိုင်တဲ့လူကများတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဆားက တော်တော်အရင်းအနှီးများတယ်။ ပိုက်ဆံ မတည်ငွေ မရှိတော့ မလုပ်နိုင်ဘူး။ ဆားဖိုသူကြီးတွေ သေတဲ့လူတွေလည်း သေကုန်ကြပြီ၊
(၁၀) ယောက်ရှိရင် (၈) ယောက်လောက် သေကုန်တာ” ဟု ပြောသည်။
မုန်တိုင်းကြောင့် အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဆားကွင်း ဧက (၂၅,၄၃၀) ပျက်စီးပြီး ဆားတန်ချိန်
(၂၉,၅၄၅) တန်ဆုံးရှုံးကာ ကျပ်ငွေသန်းပေါင်း ( ၅၄၂၇.၆၁) သန်းဖိုး ဆုံးရှုံးခဲ့သည်ဟု အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီး ဦးစိုးသာက မေ (၂၅) ရက် ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပ သည့် လေဘေးကူညီရေး ကတိက၀တ်ပြုသည့် နိုင်ငံတကာညီလာခံ၌ ပြောသည်။
ယင်းအနက် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနမှ နိုင်ငံပိုင်ဆားကွင်း ဧက (၁,၀၀၀) ကျော်၊ ဆားတန်ချိန် (၅,၃၃၁) တန်၊ တန်ဖိုးအားဖြင့် ကျပ်သန်း (၉၇၉.၄၀) ဖိုးသာ ဆုံးရှုံးပြီး ကျန်ပမာဏမှာ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများမှဖြစ်သည်။
ဆားသည် အိမ်တိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ် အစားအစာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၌ ငါးပိ၊ ငါးခြောက်၊ ဆား ရေစိမ်၊ သရက်သီးခြောက်နှင့် အခြားစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင်သာမက သားရေနယ် လုပ်ငန်းကဲ့သို့ စက်မှုလုပ်ငန်းများအထိ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုသည်။ ယခု ဆားဈေး မြင့်တက်လာသဖြင့် အဆိုပါလုပ်ငန်းများလည်း ထိခိုက်ကုန်သည်ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့၏ ဆားစားသုံးမှုပမာဏသည် (၁) လ ပိဿာချိန် (၁၀) သိန်းခန့်ရှိပြီး ဆားစက်ပိုင်ရှင် များ လက်ဝယ်၌ ပိဿာချိန် (၇၈) သိန်းကျော် ကျန်ရှိနေသေးသည်ဟု စစ်အစိုးရက သတင်း ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း ဆားလုပ်ငန်းများ အချိန်မီ ပြန်လည်မထူထောင်နိုင်ပါက လာမည့် နှစ်များတွင် ဆားဈေး ဆက်လက်တက်လာပြီး စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့က ခန့်မှန်းထားသည်။
မုန်တိုင်းကြောင့် ဆားကွင်းများ ပျက်စီးခဲ့ရသကဲ့သို့ ဆားကြိတ်စက်အများစုတည်ရှိရာ မြောင်းမြ၊ ပုသိမ်နှင့် ရန်ကုန်ရှိ ဆားစက်များနှင့် ဆားဂိုဒေါင်များလည်း အမိုးများလန်ကာ ဆားများ ရေစို ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ။
မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရရှိရေး ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဖိအားပေးမည်
တိုကျို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် တွေ့ရသော ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်း။ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၀၈။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း
(Ban Ki-moon) က မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင်လုပ်ဆောင်မယ်လို့ ဇူလိုင် ၁ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့က
ကတိပေး ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အန်န်စီဂျီယူဘီ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ ကုလသမဂ္ဂရေးရာ တာဝန်ခံ
ဒေါက်တာသောင်းထွန်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေး တိုးတက်စေဖို့ လုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ ကုလသမဂ္ဂဘက်က လုပ်ဆောင်နိုင်
တဲ့ အတိုင်းအတာ အပြည့်အ၀ ဆောင်ရွက်တာမျိုး မရှိသေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအရေး
ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတော့ သူက ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုဒေါ်ခင်မျိုးသက်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ဂျပန်နိုင်ငံမှာရောက်နေတုန်း အင်္ဂါနေ့က သတင်းစာ
ရှင်းလင်းပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုလို ပြောကြားခဲ့တာပါ။ သူက မြန်မာနိုင်ငံ
ဒီမိုကရေစီရေး တိုးတက်လာအောင် အခုထက်ပိုပြီး ဆောင်ရွက်ဖို့ မြန်မာအာဏာပိုင်
တွေကို တိုက်တွန်းပါတယ်။ နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးဒဏ်ခံရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံတကာက
ကူညီသူတွေ လက်လှမ်းမမီ ဖြစ်နေတာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်
ပြီး အကူအညီတွေလက်ခံဖို့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို နားချခဲ့တဲ့ မစ္စတာဘန်ကီမွန်းက
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် စစ်မှန်တဲ့ လွတ်လပ်ရေးရစေဖို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဖိအား
ပေးမယ်လို့ သတင်းထောက်တွေကို ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်း ဂျပန်ကလာတဲ့ အေအက်ဖ်ပီ
အင်္ဂါနေ့ ကုလသမဂ္ဂရုံး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး ပြောခွင့်ရ
မစ်ရှဲလ် မွန်းတပ်စ် (Michelle Montas) က အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမို
ကရေစီရေးကို အခုထက်ပိုပြီးလုပ်ဖို့ ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီရေး တိုးတက်ပြောင်းလဲလာအောင် အခုထက်ပိုပြီး
ဆောင်ရွက်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးဒဏ် ခံရသူတွေထဲ
က အကူအညီ တကယ်တမ်းလိုအပ်နေသူတွေအတွက် ကယ်ဆယ်ကူညီရေးပစ္စည်းတွေ
ပေးပို့တဲ့နေရာမှာတော့ တိုးတက်မှုတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ သူအသိအမှတ်ပြုပါ
တယ်” လို့ မစ္စမွန်းတပ်စ်က ပြောသွားပါတယ်။
မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ပြင်ပကမ္ဘာကို ကြည့်တဲ့အခါ သံသယမျက်လုံးတွေနဲ့
ကြည့်တတ်တာမို့ အခုလို သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ပြီး လူပေါင်း သိန်းနဲ့ချီ
သေဆုံး၊ ပျောက်ဆုံးနေတာတောင် နိုင်ငံတကာကပေးအပ်တဲ့ အကူအညီတွေကို
လက်မခံရဲဘဲ ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်မျိုးကို ရောက်ခဲ့ရ
တာပါ။ ဒါကြောင့် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက လိုအပ်ရင် မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ သူ
စကားပြောဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကို ပိုပြီး နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်လာအောင်
ဆောင်ရွက်မယ်လို့ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်က မုန်တိုင်းဒဏ် ခံရသူတွေအတွက် နိုင်ငံတကာရဲ့ ကူညီမှုတွေကို
နှောင့်နှေးအောင် လုပ်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ဖွင့်ပေးမယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း
ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမို့ ဒါဟာ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာ လျှောက်နေတဲ့ တိုးတက်မှုတခုပဲ
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ စစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီအရသာကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်
ကြီး ခံစားရအောင် ကူညီဖို့အတွက် သူ အပြင်းအထန် ဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်း ကတိ
ပေးခဲ့ပါတယ်။ အန်န်စီဂျီယူဘီ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ
အဖွဲ့က ကုလသမဂ္ဂ တာဝန်ခံ ဒေါက်တာသောင်းထွန်းကတော့ ကုလသမဂ္ဂဟာ သူ
လုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကို အပြည့်အ၀ မလုပ်သေးဘူးလို့ ထောက်ပြပါတယ်။
“နအဖရဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ ယူအန်ရဲ့သဘောထား
ကို မစ္စတာဘန်ကီမွန်းအနေနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသားပြောတာ မရှိသေးဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့
ရက်ပိုင်းတွေမှာ ကျနော်တို့တွေ့ရတာက ဇင်ဘာဘွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ရွေးကောက်ပွဲ
ဟာ နိုင်ငံတကာထုံးစံတွေနဲ့ မညီဘူး၊ အတိုက်အခံတွေကို ဖမ်းတာဆီးတာ၊ သတ်တာ
ဖြတ်တာတွေရှိတယ်၊ ဒါကြောင့် ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်က တရားမ၀င်ဘူးဆိုတဲ့ သဘော
မျိုးတွေ ဘန်ကီမွန်းပြောတာ တွေ့ရတယ်။
“ဇင်ဘာဘွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီလို တရားမ၀င်ဘူးဆိုပြီးပြောရင် မြန်မာ
ပြည်ရဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲဟာလည်း နအဖဘက်က ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ၊ ဖမ်းဆီးမှုတွေ၊ လိမ်ညာ
မှုတွေ၊ ဥပဒေကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့ မညီတာတွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့် နအဖ
ရဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို ဒါဟာ တရားမ၀င်ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းပြောဖို့
ကျနော်တို့ ချဉ်းကပ်ပြီး တိုက်တွန်းနေတာတွေ ရှိပါတယ်။
“ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ငန်းစဉ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ ယူအန်ရဲ့သဘောထား ပြတ်ပြတ်
သားသားပေးဖို့ လိုလိမ့်မယ်။ နအဖရဲ့ လမ်းပြမြေပုံဆိုတာ ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ အခုလို
မတရားမှုတွေ လုပ်သွားပြီးနောက်ပိုင်း ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ဘာမှမျှော်လင့်
စရာ မရှိတော့ဘူး။ ဆိုလိုတာက နအဖရဲ့ လမ်းပြမြေပုံဟာ နိုင်ငံရေးဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့
လုပ်ငန်းစဉ်တရပ် မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါကိုတော့ ယူအန်ဘက်က ပြတ်ပြတ်သားသား
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ ကုလသမဂ္ဂ တာဝန်ခံ
ဇင်ဘာဘွေအရေး ဖြေရှင်းဖို့ အာဖရိကသမဂ္ဂ ကြားဝင် ဆောင်ရွက်မည်
ဇင်ဘာဘွေသမ္မတ ရောဘတ်မူဂါဘီ အာဖရိကသမဂ္ဂ အစည်းအဝေး တက်ရောက်နေစဉ်။ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၀၈။
ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံမှာ သမ္မတ မူဂါဘီ(Mugabe) ပြန်ပြီးရွေးကောက်ခဲ့ရတာကိုနိုင်ငံတကာက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်
ခဲ့ပြီးနောက် အာဖရိကသမဂ္ဂက ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံမှာ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုအခြေခံပြီး တည်ဆောက်ထားတဲ့ အစိုးရ
တရပ် ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက် တောင်းဆိုကြဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်တခု ချလိုက်ပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အာဖရိကသမဂ္ဂ
ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲရဲ့ တံခါးပိတ်ဆွေးနွေးပွဲတခုမှာ ဇင်ဘာဘွေအစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံကြားမှာ ဆက်ပြီး ကြားခံဖြန်ဖြေပေးကြဖို့ သဘောတူကြပါတယ်။ ဘော့ဆွာနာနိုင်ငံက ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံကို အာဖရိကသမဂ္ဂနဲ့ တောင်ပိုင်းအာဖရိကနိုင်ငံများ ဖွံ့ဖြိုး
ရေးအဖွဲ့ကနေ စွန့်လွှတ်လိုက်ဖို့ အဆိုတင်သွင်းလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်း အခုသဘောတူညီချက်ကို အင်္ဂါနေ့ကရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘော့ဆွာနာနိုင်ငံ ဒု-သမ္မတ မွန်ဖာတီ မာရဖီ (Mompati Merafhe) က ဇင်ဘာဘွေရဲ့
တကျော့ပြန် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကြောင့် မူဂါဘီအစိုးရကို တရားဝင်အဖြစ် အသိ
အမှတ်ပြုမှာ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
အဲဒီ တံခါးပိတ်ဆွေးနွေးပွဲမှာ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ လိုက်ဘေးရီးယားနဲ့ ဆီရီယာလီယွန်နိုင်ငံ
က သံတမန်တွေကလည်း ဇင်ဘာဘွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တင်းမာတဲ့
ကောက်ချက်တွေ ချခဲ့ပါတယ်။ အီဂျစ်နိုင်ငံ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဟော့ဆမ် ဇာကီ
(Hossam Zaki) ရဲ့ အဆိုအရ သမ္မတ မူဂါဘီက အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ မိန့်ခွန်းရှည်ရှည်နဲ့
သူ့ကို ဆန့်ကျင်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ အာဖရိကနိုင်ငံတွေကို ကြိမ်းဝါးသွားတယ်လို့လည်း
ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံမှာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ဖွဲ့စည်းရန် အာဖရိကသမဂ္ဂ တိုက်တွန်းချက် မူဂါဘီ ကြိုဆို
ဇင်ဘာဘွေ နိုင်ငံမှာ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ ဖွဲ့ဖို့ အာဖရိက သမဂ္ဂ ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကို ဇင်ဘာဘွေ သမ္မတ ရောဘတ် မူဂါဘီက ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဇင်ဘာဘွေရဲ့ အဓိက အတိုက်အခံ ပါတီ ကတော့ ဆက်လက် ကြားဝင်ဖျန်ဖြေနေတာကို လက်မခံနိုင် ဖြစ်နေပါတယ်။
ကျမ်းကျိန်ပွဲ မှာ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း သမ္မတ မူဂါဘီက သူ့ တိုင်းပြည် ရဲ့ ပြဿနာတွေကို ဆွေးနွေးညှိုနှိုင်းဖို့ ဖွင့်ထားကြောင်း ဇင်ဘာဘွေ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး Sikhanyiso Ndlovuက ပြောပါတယ်။
ဇင်ဘာဘွေမှာ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရကို ဦးတည်သွားစေမယ့် ကြားဝင်ဖျန်ဖြေရေး လုပ်ဖို့ အာဖရိက သမဂ္ဂက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မတူခြားနားတဲ့ ကြားဝင်သူကို အာဖရိက သမဂ္ဂက မရွေးချယ်ခဲ့ဘူး ဆိုရင်၊ ဆက်စကားပြောနေတာ အဓိပ္ပါယ် မရှိဘူးလို့ အတိုက်အခံ ပါတီ ဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲ ပါတီရဲ့ ခေါင်းဆောင် မော်ဂန် ရှန်ဂရိုင်းက ပြောပါတယ်။
ကြားဝင်နေတဲ့ တောင်အာဖရိက သမ္မတ Thabo Mbeki ဟာ မူဂါဘီ အပေါ် ပျော့လွန်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘယ် ဆွေးနွေးပွဲပဲဖြစ်ဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲသစ်ကို ဦးတည် ကျင်းပမရမယ်လို့လည်း အတိုက်အခံ ခေါင်ေးဆာင်က ပြောပါတယ်။
ကေအန်ယူနဲ့ ၂ ရက်ကြာ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားအပြီး ဒီကေဘီအေ တပ်တွေ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာ
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်က ကေအန်ယူရဲ့ စခန်းကုန်းတခုကို ဒီကေဘီအေက သိမ်းယူခဲ့တဲ့အတွက် ကေအန်ယူနဲ့ ဒီကေဘီအေတို့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတဲ့ သတင်းတွေကို မနေ့က ကျမတို့ ထုတ်လွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
မနေ့က ည ၉နာရီနဲ့ ၁၀နာရီကြားလောက်မှာ ဒီကေဘီအေတပ်တွေ ဝေါ်လေခီး စခန်းကနေ ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ နောက်ဆုံးသတင်းတွေရရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြန်လည် ထိုးစစ်စင်လာနိုင်တယ်လို့ ကေအန်ယူဖက်က ယူဆတဲ့အတွက် တပ်တွေကို ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်၊ မြန်မာစစ်အစိုးရ စစ်သား ၈၀လောက်နဲ့ ဒီကေဘီအေ စစ်သား ၃၀လောက် ပါတယ်လို့ ထိုင်းထောက်လှမ်းရေး သတင်းတွေအရ သိရပါတယ်။
တိုက်ပွဲကြောင့် ထွက်ပြေးလာကြတဲ့ ဝေါ်လေခီးရွာသားတွေဟာ ခပ်လှမ်းလှမ်းက ရွာတွေကို ထွက်ပြေးခဲ့ကြပေမယ့် မြန်မာပြည်ဖက်က သေနပ်သံ တချက် နှစ်ချက်လောက်သာ ကြားရတော့ တဲ့ အတွက် သူတို့ရဲ့ ရွာတွေဆီကို ပြန်နေကြပြီလို့ သိရပါတယ်။ တိုက်ပွဲဟာ ၂ရက်ကြာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ကေအန်ယူဖက်က တယောက်သေဆုံးပြီး ၂ယောက် အဖမ်းခံရတယ်လို့ သိရပေမယ့် ဒီကေဘီအေဖက်က ဘယ်လောက်ထိခိုက် ကျဆုံးသလဲဆိုတာတော့ မသိရသေးပါဘူးရှင်။
ဝေါလေခီးကို ကေအန်ယူက ပြန်လည်သိမ်းပိုက်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 02 2008 15:48 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ မကြာသေးခင်က လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးခဲ့သည့် ဝေါလေခီးစခန်းကို ကရင်သူပုန်များက နောက်တရက်တွင် ပြန်လည် သိမ်းပိုက်လိုက်သည်။
ဇွန်လ ၃ဝ ရက်နေ့ နံနက်တွင် DKBA ခေါ် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် ၉ဝ၇ တပ်ဖွဲ့က နအဖ စစ်တပ်ဖွဲ့နှင့် ပူးတွဲကာ ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ရှိ ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် KNLA တပ်ရင်း ၂ဝ၁ တပ်စွဲထားရာ ဝေါလေခီး ဒေသအား ထိုးစစ်ဆင် သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာမှ နောက်တရက် နံနက်တွင် KNLA က ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ကာ ည ၉ နာရီခန့်တွင် သိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“အားလုံး ပြန်သိမ်းလိုက်နိုင်ပြီ။ မနေ့ နေ့ခင်းတုန်းက တဝက် သိမ်းထားပြီးပြီ။ ညတုန်းက သူတို့ အကုန် ပြန်ဆုတ်သွားတော့ စခန်းက ရှင်းသွား ပြီ” ဟု နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်အဖွဲ့ကြီး ဖြစ်သော ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU ဗဟို သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ပဒိုစောလှငွေက ပြောသည်။
KNLA တပ်သား ၆ဝ နှင့် DKBA တပ်သား ၈ဝ ခန့်အကြား တနေကုန် အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ပဒိုစောလှငွေက “ဟိုဘက် (နအဖ) ၂၈၄ တပ်တွေကလည်း တောင်ကုန်းပေါ်ကနေ လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ကူပစ်ပေးတယ်။ ပစ်တော့ ထိုင်းဘက် လည်း ကျတယ်။ သူတို့ဘက်လည်း ကျ၊ ကိုယ့်ဘက်လည်း ကျ။ ကိုယ့်ဘက်က အထိအခိုက် မရှိဘူး။ ကျနော်တို့ ပစ်တာနဲ့ ရန်သူပစ်တဲ့ လက်နက်ကြီး သူတို့ပေါ်ကျတာ ဘယ်လောက်ရှိမလဲ မပြောတတ်ဘူး” ဟု ပြောသည်။
ယခုအခါ ဝေါလေခီးကို KNLA မှ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ကဲထူးက ကွပ်ကဲနေပြီ ဖြစ်သည်။
တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ၌ KNLA တပ်သားတဦး ကျဆုံးသော်လည်း၊ DKBA ဘက်တွင် ထိခိုက်ကျဆုံး မည်မျှ ရှိသည်ကို မသိရပေ။
တိုက်ပွဲဖြစ်ရာ ဝေါလေခီး ဒေသသည် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်မြို့ မဲဆောက်၏ တောင်ဘက် ၄၅ ကီလိုမီတာခန့်တွင် တည်ရှိသည်။
ယခုအခါ ထိုင်းအာဏာပိုင်များက နယ်စပ်တလျှောက်တွင် လုံခြုံရေးတပ်များ တိုးမြှင့် ချထားလာသည်။
Ecovision သတင်းထောက်အမှု ရက်ချိန်း ထပ်ပေး
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 02 2008 17:59 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ဒုက္ခသည်များ၏ သတင်း လိုက်လံစုံစမ်းသဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ Ecovision ဂျာနယ်မှ သတင်းထောက် မအိမ့်ခိုင်ဦးကို ယနေ့တွင် ရုံးထုတ်သော်လည်း မစစ်ဆေးဘဲ ရမန်ယူခဲ့သည်။
ယနေ့ တာမွေမြို့နယ် တရားရုံးတွင် ရုံးချိန်းရက် ဖြစ်သော်လည်း မအိမ့်ခိုင်ဦးနှင့် အမှုတွဲဖြစ်သူ ကိုကျော်ကျော်သန့်တို့၏ ရှေ့နေများမှ အမှုတွဲကို ထပ်မံ လေ့လာလိုသေးသဖြင့် ဇူလိုင် ၁ဝ ရက်နေ့တွင် စစ်ဆေးပါရန် ထပ်မံ၍ ရမန်သာ ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဒီနေ့ ရုံးထုတ်တယ် မစစ်ဖြစ်ဘူး။ ရုံးချိန်းက နှစ်ချိန်းရှိပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဦးတို့ကနေပြီးတော့ ဒီနေ့ power တင်တယ်။ အမှုတွဲကို မလေ့လာရသေးဘူး။ ဒါကြောင့် ရုံးချိန်းပေးပါ၊ တိုင်းရုံးမှာလည်း အမှုတွေ ရှိနေသေးလို့ဆိုပြီး မစစ်တာပါ” ဟု အကျိုးဆောင်ရှေ့ ဦးခင်မောင်ရှိန်က ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၁ဝ ရက်နေ့က မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ လေဘေးဒုက္ခသည်များက ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံတကာမှ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့ (NGO) များထံ သွားရောက်၍ အကူအညီ တောင်းခံရာ၌ မအ်ိမ့်ခိုင်ဦးက သတင်းလိုက်ယူရာ တာမွေမြို့နယ် နတ်မောက်လမ်းရှိ ကုလ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ရုံးရှေ့ (UNDP) တွင် အဖမ်းခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ သူနှင့်အတူ ထိုနေ့က ကိုကျော်ကျော်သန့် ဆိုသူလည်း အဖမ်းခံခဲ့ရပြီး အမှုတွဲ တခုတည်းအဖြစ် ဖွင့်ခံထားရသည်။
သူတို့အား ပြစ်ဒဏ်ကို ၂ နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်သည့် လူထုကို ဆူပူအောင် လှုံ့ဆော်မှု ပုဒ်မ ၅ဝ၅ (ခ) ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။
ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ရှိန်က “ဒီဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မငြိစွန်းဘူးပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မအိမ့်ခိုင်က သတင်းထောက် ဖြစ်တယ်။ သတင်း ရယူဖို့ အတွက်က ဒီသတင်းကို မမှန်မကန်ဖြစ်လို့ မမှန်မကန် သတင်းကို တခြား သတင်းဌာနကို ပို့ထားတာလည်း မဟုတ်ဘူးနော်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါကို ရုံးတော်မှာ ဘယ်လိုလာမလဲ မသိဘူး။ တခြား အကြောင်းအရာတွေ ရှိအုံးမလားတော့ မသိသေးဘူး” ဟု ပြောသည်။
Ecovision ဂျာနယ်ကို ၂ဝဝ၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် စတင် ထုတ်ဝေခဲ့ကာ စာမျက်နှာ ၄၈ မျက်နှာ ပါရှိပြီး ယခင်က စီးပွားရေး ကဏ္ဍကိုသာ ဦးစားပေး ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအပြင် ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍနှင့် ဆောင်းပါးများကိုပါ ထည့်သွင်းရေးသား ထုတ်ဝေသည့် အပတ်စဉ်ထုတ် ရန်ကုန်အခြေစိုက် ဂျာနယ်ဖြစ်သည်။
သတင်းထောက်များနှင့် စစ်အစိုးရတွင် ဖြစ်ပွားသော အခြားသော အမှုတခုတွင်မူ ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသော မြန်မာနေးရှင်းမှ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးသက်ဇင်နှင့် ရုံးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစိန်ဝင်းမောင်တို့ကိုလည်း ယမန်နေ့က ရုံးထုတ် စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းနှင့် သူတို့ကို ပုံနှိပ်အက် ဥပဒေအရ ပုဒ်မ ၁၇/၂ဝ ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားကာ သက်သေများကို စစ်ဆေးခြင်း မရှိဘဲ ရုံးထုတ်ခဲ့ကြောင်း အကျိုးဆောင်ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူက ပြောသည်။
အာဏာပိုင်များက မြန်မာနေးရှင်း ဂျာနယ်တိုက်အား ဝင်ရောက် ရှာဖွေရာ ကုလ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ပီညဲရိုး၏ လူ့အခွင့်အရေး အစီရင်ခံစာ၊ ရှမ်းအမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဦးရွှေအုန်း၏ မပြိုကွဲနိုင်သော ပြည်ထောင်စုကြီးကို တည်ဆောက်ကြပါစို့ စာအုပ် အပါအဝင် ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးအတွင်း သံဃာတော်များ ဆန္ဒပြနေသည့် မှတ်တမ်းတင် စီဒီချပ်ကို စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ (စရဖ) က စစ်ဆေး တွေ့ရှိပြီးနောက် တာဝန်ရှိသူ သူတို့နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးကာ ဂျာနယ် ထုတ်ခွင့်ကိုပါ ပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်။
‘ဒီပရင်္ဂ’ ကဗျာကြောင့် စာပေစိစစ်ရေး ဝန်ထမ်းတဦး ရာထူး လျှော့ချခံရ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 02 2008 18:30 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ ‘ဒီပရင်္ဂ’ ခေါ် ဒီပဲယင်း သမိုင်းဝင်ကဗျာကို ဇွန်လထုတ် ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်းတွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြခဲ့သဖြင့် စာပေစိစစ်ရေးမှ ထုတ်ဝေခွင့်ကဒ်ဌာန အကြီးတန်း စာရေးတဦးအား ပြီးခဲ့သည့်လ ၂၄ ရက်နေ့က ရာထူး လျှော့ချခဲ့သည်။
‘ဒီပရင်္ဂ’ ကဗျာ ထည့်သွင်းဖော်ပြမှုကြောင့် မဂ္ဂဇင်းတိုက်က တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာအား အလုပ်ထုတ်ခဲ့သလို၊ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ စာပေစိစစ်ရေးဌာန ထုတ်ဝေခွင့်ကဒ်ဌာနမှ အကြီးတန်းစာရေး ဒေါ်ယဉ်ယဉ်နွယ်လည်း စာကြည့်တိုက် တာဝန်ခံအဖြစ် ရာထူးလျှော့ချခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
“ယဉ်ယဉ်နွယ်ကို ဌာန ပြောင်းခန့်လိုက်တယ်။ စာပေစိစစ်ရေး လက်အောက်ဌာနမှာပဲ။ ရာထူး လျှော့ချလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ အကြီးတန်း စာရေး အဆင့်ကနေ ရိုးရိုးစာရေးအဆင့်။ မမေစုလှိုင် (စာစစ်မှူး) ကိုတော့ သတိပေးတယ်။ အရင် ရာထူးမှာပဲ ဆက်ထားတယ်။ သူက လူသစ်ဖြစ်တော့ အဲဒီလောက် အပြစ်ပေး မခံရဘူးပေါ့” ဟု စာပေစိစစ်ရေးနှင့် နီးစပ်သူ တဦးက ပြောသည်။
ယခုလို ရာထူးမှ လျှော့ချခဲ့ခြင်းသည် ယခင် ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်းတိုက် ထုတ်ဝေခွင့် လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူ ဆုံးပါးသွားသဖြင့် စာပေစိစစ်ရေးမူအရ ထုတ်ဝေခွင့်ကဒ်အား ပြန်အပ်ရမည် ဖြစ်သော်လည်း ထုတ်ဝေသူအသစ်မှ လက်ဆင့်ကမ်း ကိုင်ဆောင်ခဲ့သောကြောင့် ယခုလို အပြစ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ် အယ်ဒီတာတဦးက ပြောသည်။
“အရင်ကတည်းက ထုတ်ဝေခွင့်ကဒ် အဟောင်းကို ထုတ်ဝေသူအသစ်က ကိုင်တာကို မမြင်ဘဲနဲ့ အခုကျမှ ဒီကဗျာကြောင့် ပြဿနာ ရှာတာပေါ့။ နောက် စာစစ်မှူးက ကဗျာပါသွားတယ်လေ။ သူက ကဗျာကို စိစစ်ဖတ်ရတာ။ ပါသွားတော့ သူ သတိပေးခြင်း ခံရတာပါ” ဟု သူက ပြောသည်။
ယခုလို ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည့် ကဗျာကြောင့် ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်းတိုက်အား အာဏာပိုင်များက ဖိအားပေးခဲ့ရာ တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ ကိုဌေးအောင် အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ရန်ကုန် စာနယ်ဇင်း အသိုင်းအဝိုင်းက ပြောသည်။
ချယ်ရီ မဂ္ဂဇင်း၏ စာမျက်နှာ ၇ တွင် သမိုင်းဝင်အမည် ‘ဒီပရင်္ဂ’ မြို့ ခေါ် ဒီပဲယင်းတွင် သမိုင်းရာဇဝင်တွင် နာမည်ကျော်ကြား လူသိများသည့် ရှေးပညာရှင်များနှင့် စစ်သူကြီး မဟာဗန္ဓုလ ကဲ့သို့သော သူရဲကောင်းများ မွေးဖွားရာဒေသ ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ သစ္စာဖောက်များ မွေးဖွားရာ၊ သူရဲကောင်းများ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရကာ လူငယ်လေးတဦး ဆိုင်ကယ် ကျပျောက်ရာမှ အမျိုးသမီးတဦး သေကံမရောက် အသက်မပျောက်ခဲ့သည့် မြို့၊ အံကြိတ် တက်ခေါက်ရသည့် အဖြစ်အပျက်များ ရှိခဲ့သည်ဟု ကဗျာရေးသူက ၎င်းမြို့ရှိရာ မုံရွာ-ရေဦး ကားလမ်းပေါ်မှ ဖြတ်သွားရာတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ခံစားချက် အထိတ်တလန့် ဖြစ်ရပုံကို ရေးသားထားသည်။
၂ဝဝ၃ ခုနှစ် မေလ ၃ဝ ရက်နေ့က အထက်မြန်မာပြည် စည်းရုံးရေးခရီး ဆင်းနေသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးနှင့် ပါတီဝင်များကို စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်များ၏ အနီးကပ် ကွပ်ကွဲမှုဖြင့် ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ဝင်များ က စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒီပဲယင်း ဒေသအနီးတွင် အကြမ်းဖက် ရိုက်နှက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုမှာ သူတို့လက်ချက် ဖြစ်ကြောင်း စစ်သည်တော်များအဖွဲ့က ပြောကြား
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 02 2008 20:56 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံ မြို့တော်ဟောင်း ရန်ကုန်မြို့တွင် တနင်္လာနေ့က ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုမှာ သူတို့လက်ချက် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ စွမ်းအားမြှင့် စစ်သည်တော်များအဖွဲ့ (VWSB) က ယနေ့ အင်္ဂါနေ့က ပြောကြားလိုက်သည်။
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးရုံးတွင် ဗုံးဖေါက်ခွဲမှု တရပ်ကို ဂျူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့ တနင်္လာနေ့က သူတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ပြည်ပ အတိုက်အခံ တဦး၏ ဘလော့ဂ် စာမျက်နှာတွင် (VWSB) က ကြေညာချက်တရပ် ထုတ်ပြန်၍ ပြောကြားခဲ့သည်။
“စွမ်းအားမြှင့်အဖွဲ့ (VWSB) ၏ စစ်ဆင်ရေးများကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သည့် အနေဖြင့် ရန်ုကုန် ရွှေပြည်သာရှိ ကြံ့ဖွံ့ရုံးကို မိမိတို့၏ အမှတ် (၁၈) တပ်ဖွဲ့က တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း” ဖြင့် မြန်မာဘာသာဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသော ကြေညာချက်ကို ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာ http://drlunswe.blogspot.com/ တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
စွမ်းအားမြှင့် မြန်မာကျောင်းသား စစ်သည်တော်များသည် မြန်မာ စစ်အာဏာပိုင်များအား ဆန့်ကျင် တိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိ ရာ ရန်ကုန်မြို့လယ် အေဘီစီ စားသောက်ဆိုင်ရှေ့တွင် ရပ်ထားသည့် (USDA) ကားကို ဧပြီလ ၂ဝ ရက်နေ့က ဗုံး ၂ လုံးခွဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုသည်လည်း မိမိတို့ လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် အဆိုပါ ကြေညာချက်က ဆက်လက် ဖေါ်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွါးရေး မြို့တော် ရန်ကုန်မြို့တွင် လှုပ်ရှားလျက် ရှိသည်ဟုဆိုသော စွမ်းအားမြှင့် မြန်မာကျောင်းသား စစ်သည်တော်များကို ဤ ကြေညာချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အတည်ပြုနိုင်ရန် ဆက်သွယ်ရာ ဆက်သွယ်၍ မရခဲ့ပါ။
ကျောင်းသား စစ်သည်တော်များအဖွဲ့၏ အမှန်တကယ် တည်ရှိမှုကို သက်သေ မပြနိုင်သော်လည်း စစ်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံကို ဆက်လက် အုပ်စိုးနေမှုအား သူတို့သာလျှင် အမှန်တကယ် ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်နေကြသူများ ဖြစ်ပြီး ဆက်လက် တိုက်ခိုက်သွားရန် သံန္နိဌာန် ချမှတ်ထား သည်ဟု အဆိုပါ ကြေညာချက်တွင် ဆက်လက် ဖေါ်ပြထားသည်။
“စစ်အစိုးရ၏ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး၊ စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းများကို ဤသို့ စစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ရာတွင် အပြစ်မဲ့သော အရပ်သားများ ထိခိုက်နစ်နာမှု မရှိစေရန် ကတိပြုသည်” ဟုလည်း အဆိုပါ ကြေညာချက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
၂ဝဝ၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလက ရန်ကုန်မြို့ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း ပင်နိုရားမား (Panorama) စားသောက်ဆိုင်တွင် လူသေဆုံးခဲ့ရသည့် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု အပါအဝင် အလားတူ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများသည်လည်း သူတို့လက်ချက် ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် (VWSB) က ယခင်ကလည်း အလားတူ ကြေညာခဲ့ဖူးသည်။
သို့သော် စစ်အစိုးရကမူ ဤဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မည်သူ့ လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင် ထုတ်ဖေါ်စွပ်စွဲခြင်း ယခုထိ မရှိသေးပါ။ “အာဏာပိုင်များက ဤအဖြစ်အပျက်ကို စုံစမ်းနေသည်” ဟုသာ စစ်အစိုးရထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
သို့သော် “အများပြည်သူ သွားလာလျက်ရှိသော နေရာများတွင် အသွင်အမျိုးမျိုးယူ၍ လှုပ်ရှားနေသော အဖျက်အမှောင့် သမားများကို အထူး သတိထား စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် တွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများထံ အချိန်မီ သတင်းပေးပို့ တိုင်ကြားကြရန်” အဆိုပါ သတင်းစာက ပြည်သူလူထုကို တိုက်တွန်း နှိုးဆော်ထားပါသည်။
Agencies / ၂ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
နိုင်ငံတကာလေ့လာသူများကမူ ယခုလ (၂၉) ရက် ရွေးကောက်ပွဲသည် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတ မှုရှိသည်ဟု မှတ်ချက်ပေးကြသည်။
Wages in Singapore up by 7-year high of 5.95% in 2007
SINGAPORE, June 30 (Xinhua) -- Last year's strong economic performance and tight labor market boosted Singapore's total wages up byaseven-year high of 5.9 percent, higher than the increase of 4.5 percent the year before,agovernment survey said on Monday.
Although inflation was higher in 2007, resulting inalower increase of real basic wage, the real total wage increase of 3.8 percent last year was still higher than the 3.5 percent in 2006, according to Report on Wages in Singapore 2007 by the Manpower Ministry.
Singapore's economy grew by 7.7 percent in 2007 afterastronger growth of 8.2 percent in 2006.
However, labor productivity growth contracted by 0.9 percent in2007 afteragrowth of 1.5 percent in 2006, partly due to record employment gains last year, said the report.
The report also showed that managers received the highest median gross monthly wages at 6,101 Singapore dollars (about 4,486U.S. dollars) in June 2007, followed by professionals at 4,030 Singapore dollars.
The third highest paid were associate professionals and technicians at 2,789 Singapore dollars.
Clerical and sales and service workers received wages nearly 2,000 Singapore dollars, while the lowest paid were the cleaners, laborers and related workers who earnedamedian gross wages at 968 Singapore dollars.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/02/20080အကြံပြုခြင်း